ပုဒ်မ ၅၀၅(က)ဖြင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့ အဆိုတော် ပိုပို ကို အင်းစိန်ထောင်သို့ပို့လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် HU GO – Cele Oscar
ပွီးခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီလ (၁) ရကျနေ့ ကနေ စတငျ ပွီး မွနျမာနိုငျငံ အတှငျးမှာ ဖွဈပှား နတေဲ့ အခွေ အနတှေေ‌ ကွောငျ့ ပွညျသူတှေ နဲ့ နယျပယျ အသီးသီး က အနုပညာရှငျ မောငျနှမတှေ က စဈမှနျတဲ့ ဒီမိုကရစေီ ပွနျလညျ ရရှိရေး အတှကျ လူထုလှုပျ ရှားမှုတှမှော ပူးပေါငျး ပါဝငျနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။ ယခုလို ပွညျသူတှနေဲ့ အတူ လှုပျရှားနေ ကွတဲ့ အနုပညာ ရှငျတှထေဲမှာ ပိုပို ကလညျး လမျးမ ပျေါထှကျကာ အားသှနျခှ နျ စိုကျ ကွိုး စားခဲ့တဲ့ သူပဲဖွဈ ပါတယျ။
လူထု လှုပျရှား မှု တှမှော ပါဝငျရငျး ၅၀၅ (က)ဖွငျ့ ဖမျးဆီး ထိနျးသိမျး ခံရမယျ့ သူတှေ ထဲတှငျ ပါဝငျလာ ခဲ့တာ ဖွဈပွီး ဧပွီလ (၁၅)ရကျနေ့ တှငျ သူမရဲ့ အိမျတှငျ ဖမျးဆီး အရေးယူ ခံလိုကျ ရတာ ပဲဖွဈပါတယျ။အရငျ ရကျပိုငျးက ဆိုရငျ ပိုပို နဲ့ ပကျသကျပွီး ကောလ ဟာလ တှကေ ထှကျ ရှိနတော ဖွဈပွီး သူမ ရဲ့ အိမျ ကလညျး အခုခြိနျထိ ဘယျရောကျ လို့ ရောကျ မှနျးမ သိသေးတာ ကွောငျ့ မမှနျတဲ့ သတငျးတှေ ကို မတငျကွဖို့ တောငျးဆိုထား တာ လညျး တှရေ့ပါတယျ။
ဒီနေ့ မှာ တော့ သူမရဲ့သူ ငယျခငျြးဖွဈတဲ့ မျောဒယျလျ သရုပျဆောငျ Hu Go က “မပို အငျးစိနျထောငျ ရောကျပွီ လို့ မိသားစုထံမှ သိရ ကနျြးမာပါစေ အမ 🙏”ဆိုပွီး လူမှု ကှနျယကျစာမကျြနှာ ထကျတှငျတငျ ပေးလာတာ ဖွဈပါတယျ။”ကနျြးမာရေးမခွေ အနတေော့ မသိရ သေးဘူး! သိရရငျ ပွနျ မြှဝပေေးပါ့မယျ! But သူက ဘုရားတ ရားသမားဆိုတော့ Will Power ကောငျးတယျ! အဲ့တော့ I HOPE So သူဒီ ဒဏျကို အသာလေး ကြျော လှားနိုငျ မှာပါ!သူအ တှကျလဲ ဆုတောငျး​ပေးကွပါအုံး🖤”လို့ သူရဲ့ ပို့ဈ အောကျတှငျ ပရိသတျတှေ သိအောငျ ထပျပွီး ရေးသား မြှဝေ ထားတာ ဖွဈပွီး ပိုပို ရဲ့ ပရိသတျတှေ ကလညျး ကနျြးမာရေး‌ကောငျးမှနျ ပွီး အမွနျဆုံး လှတျမွောကျပါ စလေို့ ဆုတောငျး ထားကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
Credit; Hu Go FB …..
ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ ကနေ စတင် ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွား နေတဲ့ အခြေ အနေတွေ‌ ကြောင့် ပြည်သူတွေ နဲ့ နယ်ပယ် အသီးသီး က အနုပညာရှင် မောင်နှမတွေ က စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည် ရရှိရေး အတွက် လူထုလှုပ် ရှားမှုတွေမှာ ပူးပေါင်း ပါဝင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလို ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ လှုပ်ရှားနေ ကြတဲ့ အနုပညာ ရှင်တွေထဲမှာ ပိုပို ကလည်း လမ်းမ ပေါ်ထွက်ကာ အားသွန်ခွ န် စိုက် ကြိုး စားခဲ့တဲ့ သူပဲဖြစ် ပါတယ်။
လူထု လှုပ်ရှား မှု တွေမှာ ပါဝင်ရင်း ၅၀၅ (က)ဖြင့် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ခံရမယ့် သူတွေ ထဲတွင် ပါဝင်လာ ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဧပြီလ (၁၅)ရက်နေ့ တွင် သူမရဲ့ အိမ်တွင် ဖမ်းဆီး အရေးယူ ခံလိုက် ရတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင် ရက်ပိုင်းက ဆိုရင် ပိုပို နဲ့ ပက်သက်ပြီး ကောလ ဟာလ တွေက ထွက် ရှိနေတာ ဖြစ်ပြီး သူမ ရဲ့ အိမ် ကလည်း အခုချိန်ထိ ဘယ်ရောက် လို့ ရောက် မှန်းမ သိသေးတာ ကြောင့် မမှန်တဲ့ သတင်းတွေ ကို မတင်ကြဖို့ တောင်းဆိုထား တာ လည်း တွေ့ရပါတယ်။
ဒီနေ့ မှာ တော့ သူမရဲ့သူ ငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် Hu Go က “မပို အင်းစိန်ထောင် ရောက်ပြီ လို့ မိသားစုထံမှ သိရ ကျန်းမာပါစေ အမ 🙏”ဆိုပြီး လူမှု ကွန်ယက်စာမျက်နှာ ထက်တွင်တင် ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။”ကျန်းမာရေးမခြေ အနေတော့ မသိရ သေးဘူး! သိရရင် ပြန် မျှဝေပေးပါ့မယ်! But သူက ဘုရားတ ရားသမားဆိုတော့ Will Power ကောင်းတယ်! အဲ့တော့ I HOPE So သူဒီ ဒဏ်ကို အသာလေး ကျော် လွှားနိုင် မှာပါ!သူအ တွက်လဲ ဆုတောင်း​ပေးကြပါအုံး🖤”လို့ သူရဲ့ ပို့စ် အောက်တွင် ပရိသတ်တွေ သိအောင် ထပ်ပြီး ရေးသား မျှဝေ ထားတာ ဖြစ်ပြီး ပိုပို ရဲ့ ပရိသတ်တွေ ကလည်း ကျန်းမာရေး‌ကောင်းမွန် ပြီး အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါ စေလို့ ဆုတောင်း ထားကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။